Madaxweyne Biixi Oo Beesha Dhexe Ku Eedeeyey In Ay Burinayso Wacadkii Ay Somaliland Ku Dhisnayd, Kana Hadlay Shirka Nairobi Iyo Jawaabta Soomaaliya – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Madaxweyne Biixi Oo Beesha Dhexe Ku Eedeeyey In Ay Burinayso Wacadkii Ay...
Madaxweyne Biixi Oo Beesha Dhexe Ku Eedeeyey In Ay Burinayso Wacadkii Ay Somaliland Ku Dhisnayd, Kana Hadlay Shirka Nairobi Iyo Jawaabta Soomaaliya
Hargeysa (Geeska)- Madaxwaynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in beesha dhexe ee Somaliland ay u muuqato in iyadu ay burinayso wacadkii la galay ee ay ku dhisnayd Somaliland. Isaga oo ku dhaliilay in beesha dhexe oo ahayd cidda marka hore beelaha kale ku riixaysay in Somaliland ay ka madax bannaanaato Soomaaliya, ay imikana siyaasiyiinteedu hadba wasiir ku xigeenno ka raadsadaan dawladda Xamar. Sida uu hadalka u dhigay. Waxa aanu intaas ku daray in haddii ay jirto lagu canaanayo in ay wacadkii Somalilandnimo ka baxday in ciddaasi tahay beesha dhexe.
Madaxeynaha oo khudbad dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyey munaasabad qasriga madaxtooyada loogu qabtay xuska 59 guurada gobannimadii Somaliland Ingiriiska ka qaadatay. Waxa kale oo uu ka hadlay arrinta dhoofka xoolaha. Waxa aanu sheegay in xukuumaddu ay dhowr jeer arrinta xoolaha kala xidhiidhay boqortooyada Sucuudiga, dhambaalo arrintaas la xidhiidhana u direen, laakiin jawaabta ay boqortooyada Sucuudigu soo dirtay ay noqotay waraaqdan dhoofka ku xidhaysa ogolaanshiyaha Soomaaliya. Waxa aanu sheegay in arrintaas ay xukuumaddu ka qaadatay go’aan diidmo, iyada oo ganacsatada oo ay arirntan ka wada hadleenna sidaas isku waafaqeen.
Waxa kale oo uu uu madaxweyne Biixi markii ugu horreysay ka hadlay muhiimada ay kala leeyihiin xusaska 18 May iyo 26 June. Isaga oo sheegay in labaduba yihiin maalmo Qaran oo ay muhiim tahay in la xuso lana wayneeyo. Waxa aanu ku tilmaamay maalmo ay Somaliland midna gumaystihii Ingiriiska ka xorowday, midda kalana xorriyadda ka qaadatay Soomaaliya oo uu ku tilmaamay cadaw.
Isaga oo arrimahas ka sii hadlayana waxa uu meesha ka saaray doodda sheegaysa in Somaliland aan la wadalahayn, balse ay jiri karaan tabashooyin, kuwaasna ay tahay in la xalliyo.
Dhanka kalena madaxwaynuhu waxa uu ka hadlay shirkii u gogol xaadhka wada hadallada lagu sheegay ee salaasadii 25-ka juun ay magaalada Nairoobi ku yeelan lahaayeen Somaliland iyo Somaliya, balse ay dawladda Soomaaliya diidday in ay ka qaybgasho. Shirkaas oo maalmihii u dambaysay ay hadal hayntiisu soo noqnoqotay ayaa uu madaxweyne Biixi sheegay ay ka soo qaybgaleen 6 safiir, midowga Yurub iyo urur goboleedka IGAD. Sidaa awgeed ay xubnaha ka socda Somaliland madaxdii shirka goobjooga ka ahyd u gudbiyeen dooddoodii iyo go,aankooda, balse xubnihii ka socday Somaliya aaanay kasoo qayb galin shirkaasi.
Madaxweyne Biixi waxa uu sheegay in markii shirkaasi dhammaaday ay dawladda Soomaaliya madaxdii shirka soo qabanqaabisay u sheegtay in aanay marnaba arrimo la xidhiidha wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya ku galayn dalka Kenya oo ay sheegeen in ay xiisadi ka dhexeyso.
Madaxwayne Bixii waxa uu sheegay in aanay marnaba galayn Somaliland shir la mid ah kuwii uu u qabtay dalka Turkigu oo xusay in ay Somaliland ka daashay. Sidaa awgeed u baahan tahay guddi dhexdhexaad ah oo ka garnaqda khilaafka masiiriga ah ee u dhaxeeya Somaliya. Isaga oo intaas ku daray in Masiirka qarannimada Somaliland ay maamulkeeda gacanta ku hayaan shacabka Somaliland.
Previous article“Rauters”: Imaaraadka Carabta ayaa hoos u dhigtay joogitaanka milatari ee Yaman iyada oo loo eegayo xiisadda Gacanka khaliijka oo sare u sii kacaysa
Next articleMuumule Bangi Oo Taajiriinta Ka Xadda Lacago Si Uu Ugu Taageero Dad Sabool Ah
Soomaaliya oo laga heley coronavirus